Wararka - Sidee loo sameeyaa haddii furaha gaariga lumo?
La xiriir rugta dayactirka
Isku xidhka fure cusub
Haddii aad dooratid inaad ku hagaajisid xarunta dayactirka fure cusub, markaa waxaad u baahan tahay inaad siiso gaariga iyo aqoonsiga milkiilaha. Marka loo eego moodello kala duwan, xarunta dayactirka waxay uga baahan tahay milkiilaha inuu siiyo lambarka sirta ah ee ka hortagga xatooyada 17-lambar ee furaha qaabeynta. Furahan sirta ah maahan lambar ilig, laakiin waa eray sir ah oo la siinayo milkiilaha markii uu iibsanayay gaari cusub. Moodooyinka qaarkood, xarunta dayactirka waxay siisaa soo-saaraha gaariga shahaadada gaariga iyo milkiilaha. Soo-saaruhu wuxuu weydiiyaa lambarka sirta ah ee la-dagaallanka xatooyada furaha qaabeynta iyada oo loo marayo keydka macluumaadka oo fakis loogu diro xarunta dayactirka.
Kadib helitaanka eraygan sirta ah, xarunta dayactirka waxay uga baahan tahay milkiilaha inuu siiyo nambarka ilkaha ee muhiimka ah si uu u furo furaha birta cusub. Haddii uusan jirin nambarka astaanta ilkaha, waxaad weydiin kartaa lambarka astaanta ilkaha adoo adeegsanaya keydka macluumaadka. Isla mar ahaantaana, rugta dayactirka waxay wax ka beddeli kartaa xuduudaha kumbuyuutarka dusha si loogu dhigo furaha gaariga lumay sida furaha sharci darrada ah, laakiin waa haddii gaariga aan la bilaabi karin, furaha lumayna uu weli furi karo albaabka. Halkan waa xusuusin gaariga Milkiilayaasha: mar haddii furaha gaariga la ogaado inuu lumay, xitaa haddii fure cusub la qaabeeyey, waa inaad weli ka taxaddartaa inaadan ku keydin gaariga waxyaabaha qiimaha leh.
Fadlan si toos ah ugu beddel qufulka gaariga qolka hagaajinta Maaddaama ay weli jirto halista luminta waxyaabaha gaariga ku jira markii la furayo furaha, beddelidda qufulka ayaa gebi ahaanba baabi'in doonta halistaas. Si kastaba ha noqotee, qiimaha beddelashada qufulka ayaa aad uga ballaaran furaha cusub. Waxay kuxirantahay moodellada kaladuwan iyo gaariga, Qufulku waa kala duwan yahay. Moodooyinka qaarkood waxay u isticmaalaan isla furaha albaabka, albaabka shandadaha, albaabka qaybta gashiyada iyo daboolka taangiga shidaalka. Waqtigan, haddii qufulka gaariga oo dhan la beddelo, qufullada u baahan in la beddelo ayaa la isbarbar dhigayaa.
Guud ahaan marka la hadlayo, wadarta qiimaha furaha cusubi wuu ku kala duwan yahay 300 yuan ilaa 2,000 yuan, laakiin qiimaha cusboonaysiinta qufulka gaariga wuxuu noqon karaa 4 ilaa 5 jeer tan bedelka furaha, bedelka furaha badiyaa sidoo kale maahan gudaha baaxadda sheegashada shirkadda caymiska, sidaas darteed kharashku wuu ka badan yahay.
Guud ahaan marka la hadlayo, fure cusub ayaa lagu qalabeyn karaa dhowr saacadood, laakiin qaar ka mid ah moodooyinka raaxada-dhamaadka sare waxay u baahan yihiin waqti dheeri ah, maxaa yeelay qaar ka mid ah gawaarida sare ee la keeno waxay u baahan yihiin inay dhammaystiraan nidaamka furaha iyo tuurista furaha asalka ah ee goobta wax soo saarka. Gawaarida heerka sare waxay leeyihiin heerar sarre oo furaha ereyga iyo iswaafajinta iyo qiimaha sare.
Waqtiga boostada: Aug-17-2020